साताको ब्लगर: मेघराज रसाइली - MeroReport
साताको ब्लगर: मेघराज रसाइली
नौ वर्ष देखि पत्रकारिता गरिरहेका मेघराज रसाइली हाल बिबिसी मिडिया एक्सनमा साझा सवाल कार्यक्रमका कार्यक्रम उत्पादक हुन । इटहरी, सुनसरीमा जन्मिएका मेघराजले २०६० सालदेखि सप्तकोशी एफएमबाट पत्रकारिता सुरु गरेका हुन् । त्यो भन्दा अगाडी फाट्टफुट्ट लेख्ने गरेको र २०६० देखि सकिय्र पत्रकारिता गरेको उनी बताउँछन ।
२०६२ मा मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिजममा स्नातककोत्तर अध्ययनको लागि भनेर उनी काठमाडौं आए । काठमाडौंले आकर्षित गर्‍यो, साथै अवसर पनि दिएकोले हाल यही बसोबास गर्दै आएको उनी बताउँछन् । उनी मुलधारको मिडियासँगसँगै ब्लगिङमा पनि उत्तिकै जमेका छन् र प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीः
अफिसमा बस्दा रिसर्च गरेर, पत्रिका पढेर अनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार लेखेर । कार्यक्रम बनाउनको लागि आजको एजेन्डा के रहेछ, के बिषयवस्तु रहेछ भनेर जान्नको लागि पनि सोसल मिडिया हेर्ने गर्दछु । घरमा हुँदा टिभी हेर्ने, रेडियो सुन्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने र किताब पढ्न मन लाग्छ । बेला-बेलामा लेख्छु ।
मुल धारकै पत्रकारितामा जमिरहनुभएको मानिस कसरी ब्लगिङमा आकर्षित हुनुभयो ?
पत्र-पत्रिकामा सिमित स्थान हुन्छ छाप्नको लागि । हामी कार्यक्रममा पनि रिपोर्ट बनाउँदा सबै कुराहरु समेट्न सम्भव नहुन सक्छ । त्यो कुरा कसरी लेख्ने भनेर माध्यम खोजिरहेको थिएँ । उकुसमुकुस भएको बेलामा लेख्थेँ । उमेशजिको ब्लगमा पनि लेख्थेँ दुइ बर्ष जति अगाडी । गत जनवरीमा आरएनटिसि को तालिम लिन नेदरल्यान्ड्स गएँ । मलाई ब्लगिङ गर्न एकदमै उत्प्रेरित गर्नु भयो त्यहाँको प्रशिक्षकले । मेरो फेसबुकमा धेरै कमेन्ट र लाईक आएको देखेपछी मलाई ब्लगिङ गर भनेर सिकाउनुभयो । त्यसपछी मैले ब्लगिङ सुरु गरेँ । मैले वर्डप्रेसबाट ब्लगिङ गर्न थालेँ । धेरै भएको छैन तर नियमित अपडेट गर्ने गरेको छु । राम्रै प्रतिकिया पनि आएको छ । दिनमा छ सय जति हिट पनि भएको छ ।
तपाईंको ब्लगको नाम आरन राख्नुको कारण के हो ?
मेरो एक जना साथी हुनुहुन्छ दिपक भट्टराइ । उहाँले मलाई एक दिन फुर्काएर तपाईंको नाम स्वर्ण अक्षरले लेख्नुपर्छ भन्नु भयो । मैले स्वर्ण अक्षर होइन फलामले लेखिदिए पुग्छ किनभने मेरो बुवा आरनको काम गर्नु हुन्छ र उहाँको सम्मान हुनेछ भनेर मैले जिस्केर भनेको थिएँ ।
ब्लगको नाम के राखौँ भनेर साथीहरु छलफल गर्ने क्रममा बुवालाई सम्मान हुने कुनै राख्न सल्लाह दिनु भयो । मैले मेरो ब्लगको नाम आरन राखेँ । यो नाम मैले मेरो बुवाको कामलाई सम्मान गर्दै राखेको हुँ । उहाँले आरनमा काम गरेर मलाई पढाउनुभयो , हुर्काउनु भयो । यो परम्परागत रुपमा काम गर्ने ठाँउ हो र अलि नौलो पनि हुन्छ भनेर मैले यो नाम राखेँ ।
के पोस्ट गर्नु हुन्छ ब्लगमा ?
सामाजिक मुद्दा र राजनैतिक विषयमा टिपण्णी गर्छु । मन लागेको विषयलाई उजागर गर्ने, आफ्नो विचार, दृष्टिकोण व्यक्त गर्ने र मलाई उचित लागेको समाधान पनि दिने प्रयास गर्छु ।
मुलधार मिडियामा मिडिया मालिक वा सम्पादकको कारणले कतिपय कुराहरु आउँदैनन् । तथापी मुलधारले कतिपय कुरा उजागर गरेको छ । त्यो हुँदा-हुँदै मुलधार मिडियामा कहिलेकाहीँ सन्तुलन नभएको वा पार्टीको पत्रिका हुने र कार्यकर्ता पत्रकार हुने देखिन्छ । ब्लगमा त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो कसैको वकालत गर्छ भने इच्छा हुनेले पढ्छन अरुले पढ्दैनन ।
आफुलाई मन परेको र बढी पढीएको ब्लग पोस्ट ?
एकदमै हेरिएको ब्लग चाँही मेरो चोक मान , छत्र मान र प्रचन्ड भन्ने पोष्ट हो । च्याउ खाएर सबै परिवार गुमाएका चोकमानलाई प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले पालनपोषणको जिम्मा लिएका थिए । तर गोली खाएर हजारौँ मानिस मरे कती अनाथ भए उनीहरुको जिम्मेवारी प्रचन्डले लिने कि नलिने भनेर लेखेको थिएँ । मार्केटिङ कती गर्‍यो भन्ने पनि हो । फेसबुक ट्विटरमार्फत शेयर गर्‍यो भने दिनमा दुईतीन सयले हेर्नुहुन्छ ।
कस्तो प्रतिकिया पाउने गर्नु भएको छ ब्लगमा ?
ब्लगमा प्रतिकिया दिने कम हुनुहुन्छ । फेसबुकको इन्बक्समा मेसेज आउँछ । कतिपय फोन गरेर आरन भन्ने नाम नराखेको भए हुन्थ्यो भन्नु भएको छ । तर धेरै जसोले युनिक नाम भयो त्यसैले यो राम्रो छ भन्नु भएको छ । कन्टेन्टको हिसाबले ठिकै छ अझै राम्रो लेख्नु भनेर कमेन्ट आउने गर्दछ । ट्विटरबाट पनि यस्ता प्रतिक्रया आँउछन् ।
नेपालमा ब्लगिङ गर्ने ट्रेन्ड कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
धेरैजसो आत्मपरक र समाचार भन्दा पनि बढी आफ्नो अनुभव लेख्ने देखेको छु मैले । व्यवसायिक ब्लगर एक दुइ जना मात्रै छन । अहिले आएर ब्लगिङ गर्ने ट्रेन्ड बढेको पनि मैले महशुस गरेको छु ।
कुन कुन सामाजिक मिडिया चलाउनु हुन्छ ?
म फेसबुक चलाउँछु । फेसबुकमा नियमित जस्तो नै स्टाटस अपडेट गर्छु । राजनैतिक विषयवस्तु अलि बढि , सामाजिक र आफ्नो भोगाइलाई व्यङ्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गर्छु । ट्विटर चाँही मैले भर्खर मात्र थालेको हुँ ।
फिल्ड भिजिटमा जाँदा सोसल नेट्वर्किङ साइट चलाउने ट्रेन्ड कस्तो देख्नु भयो ?
फेसबुक धेरै चलाउने देखेँ मैले । एकपटक अछाम जाँदा गाडी पल्टेर निकै तल खसेको रहेछ । केहि मजदुरहरु मेसिन लगाएर तान्दै हुनुहुन्थ्यो । एकजना ज्यामी दाइले मेरो फोटो खिचिदिनुस् न भन्नु भयो । अनि उनले भरे मेरो फेसबुकमा राखिदिनु है भने । मलाई अचम्म लाग्यो । हामीले नपत्याएको व्यक्तिसम्म पनि यसको पहुँच पुगेको रहेछ वा पहुँच नभए पनि चर्चा चलेको रहेछ ।
थुप्रै युवाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । गाउँमा सहयोग गर्नको लागि, बाढी पीडितको लागि सहयोग र अरु धेरै परोपकारी र राम्रा कामको लागि प्रयोग भएको छ । यसको साथै गलत प्रवित्ति पनि देखिएको छ । नेताहरुको अनकौँ तस्बिर बनाएर, बाल-बलिकाको तस्बिर गलत तरिकाले प्रयोग गरेर शेयर गर्ने, भद्दा गाली गर्ने, एउटा समुहले अर्को समुहलाई पेज बनाएर गाली गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ ?
व्यतिगत रुपमा अनफ्रेन्ड, ब्लक गर्न सकिन्छ, यस्तो गलत प्रवित्ति रोक्न साइबर कानुन नै कृयाशिल भयो भने पर्याप्त हुन्छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ आचारसंहिता जस्ता केही बन्देजहरुले यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न सक्छन् ?
म चाँही आचार-संहिता जरुरी छैन भन्छु । ब्लगिङमा आचार-संहिता पालना भए नभएको हेर्ने निकाय नै छैन । मेरो विचारमा अराजकताले पनि सिर्जनशीलता निम्त्याउँछ । नकारात्मक अराजकताले रुवान्डामा जस्तो साठी लाख मान्छे मर्लान भने सकारात्मक अराजकताले सयौँ मानिसलाई ज्ञानी पनि बनाउला । बुद्द पनि अराजक मानिस थिए कुनै जमानामा, ग्यालिलियो पनि अराजक नै थिए अदालतले उनलाई अराजक घोषणा गरेको थियो, मृत्युदन्डको सजाय सुनाएको थियो । तर बुद्ध र ग्यालिलियो जस्तो सकारात्मक अराजक हुनु पर्‍यो । त्यसैले कुनै नियमले बाँधिनु भन्दा पनि आफ्नै विवेक, ज्ञान प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । ब्लग गर्ने मानिस त्यति अबुझ छन जस्तो लाग्दैन । आफ्नो ब्रह्मले भ्याएको चिज लेख्नु पर्छ र त्यसमा कुनै नियम हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
अन्तमा, मेरोरिपोर्ट कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
ट्विटर चलाउन थालेपछी यसको बारेमा थाहा पाएँ र चलाउन थालेँ । राम्रो लाग्यो । खासगरी नेपालका ब्लगरलाई एकै ठाँउमा राख्ने काम गरेको छ यसले । ब्लगिङ कसरी गर्ने भनेर नयाँ ब्लगरलाई सिकाउने काम गरेको छ । यसको मार्केटिङ अलि कम भयो जस्तो लाग्छ । अलि प्रचार गर्नु पर्‍यो ।
मेघराजको ब्लग: meghrajrasailee.wordpress.com
Comment by Meghraj Rasaili on August 8, 2012 at 7:33pm
धन्यवाद इन्द्रजी र मुनाजी।
Comment by Indra Dhoj Kshetri on August 8, 2012 at 12:19pm
बधाइ हो बधाइ मेघजी । बधाई दिन अलिकति ढिला भएछ माफ पाम् । अझै धेरै पढ्न पाइयोस् । मौका मिलेमा www.mediamanch.net तिर पनि छिरेर पत्रकारिताका अनुभव बाँड्न सक्नुहुन्छ । :)
Comment by Amuna Chapagain on August 8, 2012 at 11:59am
Comment by Meghraj Rasaili on August 6, 2012 at 9:50am
धन्यवाद डाक्टर साहेब।
Comment by Dr. Surya B. Parajuli on August 6, 2012 at 7:37am
Comment by Meghraj Rasaili on August 5, 2012 at 11:06pm
धन्यवाद बिनय सर। शुभाशिष पाइरहुँ।
Comment by Binaya Shekhar on August 4, 2012 at 6:46pm
Congratulations MeghaRaj. Love your thoughts. Blogging is all about being responsible. Wish you good for the day ahead.
Comment by Meghraj Rasaili on August 4, 2012 at 2:23pm
धन्यवाद प्रकाशजी, अजीताजी र दीपकजीलाई। तपाईहरुको प्रेरणा र रचनात्मक सुझाव सँधै पाइरहुँ।
Comment by Prakash Lamichhane on August 3, 2012 at 9:49am
Congratulations Meghraj ji....
Comment by Ajeeta Sigdel on August 1, 2012 at 4:39pm
Comment by Deepak Aryal on August 1, 2012 at 4:37pm
बधाई छ, मेघराजजी।